University of Sharjah - Ọmụmụ ná mba ọzọ na United Arab Emirates
University of Sharjah Nkọwa
tọrọ ntọala : 1997
Echefukwala atụle University of Sharjah
Idebanye aha na University of Sharjah
The University of Sharjah e guzobere na ebumnuche na ọhụụ na-eme ka àgwà na-akọrọ site ma ama mahadum gburugburu ụwa. The muta na nnyocha omume ha na-enye na-aka enwe saa mbara ma multi-inye…
The University of Sharjah bụ a keukwu agụmakwụkwọ alụmdi na a pụrụ iche mmụta ịke na a zuru ụwa ọnụ ọhụụ. Ọ bụ onye ọsụ ụzọ na academia, nnyocha sayensị na nkà na UAE na GCC region. All omume na-nyere ikike ịbụ site UAE Ministry of Higher Education na Scientific Research.
The University of Sharjah a ghọtara dị ka mmadụ n'etiti ndị kasị reputable na mbara universitiesin na Middle East. Ọ mara maka ya mma na-ezi na mmụta, research, na-adigide agụmakwụkwọ mmemme na-enye àgwà ọrụ na ndị obodo na-eme ka ọdịmma nke ọha mmadụ.
The University of Sharjah akpata a omenala oké egwu ase na a iche iche mmụta gburugburu ebe obibi nke na-eduga na nchọpụta, kere eke, na dissemination nke ihe ọmụma. The University-agba mbọ ka enye ya ụmụ akwụkwọ na akwụkwọ ma-adịru ogologo ndụ mmụta ahụmahụ nke ndị kasị mma site ndokwa nke a keukwu n'elu ikpo okwu nke magburu onwe agụmakwụkwọ na ọrụ mmemme, -akwalite creativity, ọhụrụ na nnyocha na mfọn, na ime onwe onye, -elekọta mmadụ, agụmakwụkwọ, na ọrụ mmepe nke niile ụmụ akwụkwọ. The mahadum na-eje ozi na socio-omenala na ụba na-egbo mkpa nke ndị obodo na ndị mmadụ na UAE na karịrị.
The University of Sharjah mgbalị iji nweta ya ozi site na-esonụ set nke isi ụkpụrụ nke kọwaa ya agwa na omenala
Usoro ziri ezi na Civic ibu ọrụ dị na-aga n'ihu Arab na islam ideals
Kasị elu ụkpụrụ nke iguzosi ike n'ezi, nghọta na ngosipụta
nkwanyerịta ùgwù, ziri ezi na collegiality nile n'etiti ndi nile
Freedom of ọgụgụ isi echiche na okwu
The University ga na-agbalịsi ike imeta ndị na-esonụ ihe mgbaru ọsọ:
N'aga n'ihu nnyocha sayensị na mfọn na UOS otu mba ozo
Ịzụlite mkpa ala-nke na-art akụrụngwa dị mkpa maka nnyocha
Ịmụbawanye gụsịrị akwụkwọ ọmụmụ na mmemme iji iru mkpa specialties na elu degrees nke mba quality
-Akwalite mma na-ezi, na ọkaibe akụrụngwa, site akwalite mmụta niile agụmakwụkwọ mmemme, gụnyere mmezi-gbasaa akwụkwọ omume
N'oru na-ejigide nkà na iche iche ụmụ akwụkwọ, ọkà mmụta na-arụ ọrụ na ike kwesịrị ekwesị gburugburu ebe obibi iji nuturo ọhụrụ, creativity, na ịchụso ihe ọmụma
-Akwalite onwe onye, -elekọta mmadụ, agụmakwụkwọ na ọrụ uto nke niile ụmụ akwụkwọ na a proactive n'ụzọ iji kwadebe ha ka ha bụrụ ndị ndú ha họọrọ Ọrụ
Bụ ịmụta ụzọ mmekọrịta na ndị obodo, gụnyere ọha ọrụ ụlọ ọrụ iji na-eme ka ihe socio-aku mkpa nke ndị obodo site raara etinyere research
Eme ka socio-omenala, na nkà mmụta sayensị na ụba na ọganihu nke ọha mmadụ site na-elekọta mmadụ responsiveness ma dị irè njikọ aka
Leverage mmekọrịta na Alumni na-enwe ọganihu ndị University ozi
Ịzụlite dị irè na oru oma agụmakwụkwọ na nhazi Filiks na-akwalite ma na-akwado kacha mma na-ezi, nnyocha na-ejere obodo
Hiwere iwu Sharia na Alakụba ọmụmụ
Ọma Arts & Kere
College nke gụsịrị akwụkwọ Studies
The University of Sharjah e hiwere na 1997 site HH Sheikh Dr. Sultan biini Mohamed Al-Qasimi, òtù nke kasị kansul nke United Arab Emirates na onye na-achị Sharjah. The mahadum e guzobere dị ka a n'ihi nke Sheikh Sultan ọhụụ nke a pụrụ iche na alụmdi na Emirate of Sharjah, dabeere na n'elu islam ije na akụkọ ihe mere eme na iji izute ina nke gbara ya gburugburu otu, akpan akpan nke UAE na golf region.
The Kalba campus, nke nwere 100 nde AED maka ewu mmefu, e inaugurated na February 28, 2011 n'obodo Kalba site president. nke 100 nde AED, 90 nde wee kwupụta agụmakwụkwọ, ọkà mmụta sayensị na nhazi ụlọ na 10 nde e nọrọ na n'èzí campus na gburugburu ebe.
Dị ka akụkụ nke Medical & Heatlh Sciences campus, na University Teaching Hospital na University Teaching Dentistry Hospital na-eguzobe na June 11, 2011 site president.
The Stock Market maka Training virtual monitor e bidoro na October 1, 2012. Na ileba anya e guzobere site Emirates Securities na commodities Authority. The mebere monitor e mere a yiri ejiji na Dubai Financial Market na Abu Dhabi Securities Exchange virtual monitor nke. Ọzụzụ ahịa simulator e bidoro na September 25, 2013 dị ka akụkụ nke a MoU n'etiti mahadum na ESCA.
on 24 March 2012 atọ floored n'ọbá akwụkwọ na nwaanyị campus e meghere. Ọbá akwụkwọ e wuru na mpaghara karịa 10,000 square mita na nwere ikike nke chere na a nde akwụkwọ. Nraranye nke ọbá akwụkwọ ụba ngụkọta ọnụ ọgụgụ nke mahadum ọba akwụkwọ ruo itoolu ọba akwụkwọ.
Ị chọrọ atụle University of Sharjah ? ajụjụ ọ bụla, comments ma ọ bụ reviews
University of Sharjah na Map
photos: University of Sharjah ukara Facebook
Jikọọ na-atụle nke University of Sharjah.